Adeegga tijaabada dhagaxa internetka - 48 saacadood natiijooyinka - 10 $ US halkii dhagax
Waxaan bixinaa adeeg tijaabo gemstone ah oo toos ah
Qiimaha adeegga dhagaxa ee khadka tooska ah: kaliya 10 $ US halkii dhagax / Natiijo 48 saacadood gudahood.
* Bixinta lacag kasta.
Iyada oo kusalaysan sawiro gemstone iyo fiidiyowyo la bixiyay. Waxaan baari doonaa sifooyinka kala duwan ee dhagaxaaga:
Adeegga tijaabada dhagaxa internetka. Tusaalaha natiijada e-maylka:
Diidmada iftiinka. (dab)
Qaabka loo yaqaan 'Crystal' (dhagaxyada adag, dhagaxyada aan goyn)
Kadib markaad qiimeyso dhamaan guryahaas, waxaad natiijadaada u heleysaa sida ugu macquulsan uguna macquulsan.
Tusaale ahaan, haddii natiijadu tahay “Glass“, Laakiin ma sheegi karno inay taasi tahay iyo in kale quraarad dabiici ah or galaas la soo saaray. Waxaan ku siin doonaa labada jawaabood, iyadoo boqolkiiba itimaalka ah.
Muraayadaha. Itimaalka: 100%
Muraayada dadku sameeyay: itimaalka 90%
Quraaradda dabiiciga ah (Obsidian): itimaalka 10%
Jawaabtaada waxaad ku heli doontaa emayl ahaan 48 saacadood gudahood bixinta ka dib.
Macluumaad dheeri ah ama raadraac lama bixin doono.
Marka ay sii fiicnaato tayada sawiradaada iyo fiidiyowyadaada, ayaa ah sida ugu saxsan ee aqoonsigeennu u noqon doono.
Sidee loo diraa sawirrada iyo fiidiyeyaasha?
Markaad hesho lacagtaada, waxaad heli doontaa emayl xaqiijin ah oo leh xulashooyin kala duwan si aad ugu dirto feylashaaga: Email, Messenger, WeChat, WhatsApp, Line, Viber, iwm.
Sidee loo aqoonsadaa sawirradeenna?
Markaad direyso feylasha, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad dirto lambarka qaansheegtaada, si aan si buuxda u aqoonsan karno faylalkaaga.
Waxaan hayaa dhowr dhagax oo aan tijaabiyo, maxaan sameeyaa?
Waad dooran kartaa tirada dhagaxyada ee tijaabada ah, waxaad ku bixin kartaa waxwalba isku waqti hal hal biil.
Waxaan kuu soo diray sawiro iyo fiidiyooyin laakiin wali jawaab kama helin?
Waxaa laga yaabaa inaad ilowday inaad sheegto nambarka qaansheegtada ama laga yaabee inaadan weli bixin.
Ma garan karaa waddanka uu asal ahaan ka soo jeedo dhagaxu?
Maya, Suuragal maahan in la ogaado asalka juquraafi ahaanta ee dhagax ahaan sawir ama muuqaal.
Xaaladaha badankood, Suuragal ma aha in si sax ah loo tijaabiyo dhagax adoo aan awoodin in lagu sameeyo tijaabooyinka qalabka.
Runtii, Suuragal maahan in la tijaabiyo cufnaanta, tusmada dib-u-milicsiga, Halabuurka kiimikada. Sidoo kale suurtagal ma aha in la falanqeeyo waxyaabaha ku lug leh miikroskoob, iwm.
Macluumaadkaas oo dhami waxay lagama maarmaan u yihiin falanqaynta saxda ah. Jawaabteena ayaa sidaas darteed inta badan noqota mid badan, sababtoo ah baaritaanka muuqaalka wuxuu kaliya noo sheegayaa macluumaad gaar ah oo kiisaska intooda badan aan ku filnayn.
Natiijadu ma noqon doonto shahaado rasmi ah. Waxay noqon doontaa oo keliya ra'yiga qof cilmi nafsiyeed qalin-jabiya.
Xaalad kasta oo loo maleyn karo looma isticmaali karo qiimeyntan.
Annagu mas'uul kama noqon doonno iibka ama iibsashada dhagaxa.
Sida saynisyahano. Ma bixinno adeegga qiimaynta qiimaha. Qiimaha wuxuu kuxiranyahay suuqa, oo aan wax lug ah ku laheyn sayniska gemological.
Jawaab celin lama bixin doono markii la helo jawaabta. Runtii, xitaa haddii aad ka niyad jabto jawaabta. Khabiirka cilminafsigu wuxuu waqti isku mid ah ku shaqeynayay dhagaxa wax kasta oo ay tahay been abuur ama dhagax dhab ah.
Dalbo adeegga tijaabada dhagaxa khadka tooska ah: 10 $ US halkii dhagax
Hadaad rabto inaad lahadasho macalinka cilmiga gemology. Waxaan sidoo kale ku bixinnaa adeegga la-tashiga khadka tooska ah ee fiidiyowga, ballan ahaan, laga bilaabo 30 US $ saacaddii. Isniinta ilaa Jimcaha. 8subaxii ilaa 6-da galabnimo. Aagga wakhtiga Cambodia / Thailand (UTC + 7)
Khadka toos ugu sameyso adeegga latalinta gemology: 30 $ US saacaddii